China, Yakasarudzika, Hunhu hweVakuru tutu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Shenzhen Ritter Star Technology Co LTD - Page 2
Dhizaini yeBallet Performance Tutus Inotengeswa yakafanana ne "Vine" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
Dhizaini yaTutu Ballerinas Yekutengesa yakafanana ne "Spades A" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
tsvuku ballet tutu vanhu vakuru Dhizaini ya Ballerina Pink Tutus Yekutengesa yakafanana ne "Treasure" .Iine izvo: Rich rhinestones! yakawanda yakajeka pasi pechiedza chechiedza; Yakagadzirwa nemachira ejasi, ichiita kuti muviri uratidzike kunge wakatsetseka, wakanaka uye wakanaka; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakanyanya kubatana uye nyanzvi; Akakura gradi dhizaini! Mamwe akapfava uye akazara mavara, akanaka kwazvo!
tsvuku Pancake tutu
Iyo yekufemerwa dhizaini yeRed Pancake Tutu kunouya kubva kuâ € lFlame Shiriâ € Iyo ine: Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhureki uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi; Yakasarudzika siketi dhizaini inoshandiswa.
Dhizaini yeProfessional Ballerina Tutus Inotengeswa yakafanana ne "Red Agate" .Iine: Rhinestones dzakapfuma! yakanyanya kupenya pasi pechiedza chechiedza ;; Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuremu uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.
Dhizaini yeBallet Platter Tutus Inotengeswa yakafanana ne "Moto". Iyo ine: Yakavanzwa kumashure bhureki, kumashure bhuregi uye muviri ruvara musanganiswa imwe, yakawanda yakabatana uye nyanzvi.